Karatra Krismasy 11 maimaim-poana | Famoronana an-tserasera
Karatra Krismasy 11
Lua louro | | Cartoon vector
Be loatra ho an'ny miarahaba ny taona Averina indray fa maniry fety sambatra, ny fandefasana karatra paositra amin'ireo namantsika akaiky indrindra sy fianakaviana dia fomban-drazana tsy maintsy atao.
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia manome karatra paositra Krismasy 11 ho anao amin'ny endrika vector (ny sasany amin'ny .ai-endrika manokana ho an'ny Adobe Illustrator- ary ny hafa amin'ny .eps). Io dia hahafahanao manova ny habeny (manitatra na mampihena azy ireo) araka izay tadiavinao nefa tsy mamoy kalitao. Ny hany zavatra ilainao hahafahanao manokatra fisie dia, raha ny fisie .ai fisie, Adobe Illustrator; ireo ao amin'ny .eps dia azo sokafana amin'ny alàlan'ny programa vector (Illustrator, Corel Draw…).
Karatra Krismasy 11 maimaim-poana
Faly 2014 feno loko: Sary Vector amin'ny endrika 626 x 626 px .ai, namboarin'i dryicons.
tratry ny krismasy: Sary Vector amin'ny endrika .ai 500 x 626 px.
2014: Sary Vector amin'ny endrika .ai 500 x 626 px.
hazo noely: Sary Vector amin'ny endrika .ai 501 x 626 px.
Fetin'ny ririnina: Sary Vector amin'ny endrika .ai 500 x 626 px.
Merry Noely 2: Sary Vector amin'ny endrika .ai, 500 x 626 px.
Reindeer misy firavaka: Sary Vector amin'ny endrika .ai, 438 x 626 px.
Karatra misy hazo Noely 3D (mila misoratra anarana ianao ary miditra mba hisintomana): sary vector amin'ny endrika .eps
Kitapo Vector Noely (Mila misoratra anarana ianao ary miditra mba hisintomana): amin'ny sary iray dia manana sary maromaro mifandraika amin'ny Krismasy ianao (izy rehetra ireo dia hita ao amin'ny sary, ao anatin'ny "fonosan'ny fanomezana"). Azonao atao ny misafidy singa iray ary apetaho amin'ny asa hafa. .Format format
Hazo krismasy misy tsipìka (Mila misoratra anarana ianao ary miditra mba hisintomana): azonao soloina ny lahatsoratra tianao ny Lorem Impsum.
Reindeer mampihomehy (mila misoratra anarana ianao ary miditra mba hisintomana): sary vector amin'ny endrika .eps
Raha te-hahita loharanom-pahalalana bebe kokoa ho an'ny volavolanao Krismasy ianao dia afaka mitodika any amin'ity lahatsoratra ity izay hahitanao azy Fonosana bokeh 7 Bokeh.
Fanazavana fanampiny - Fonosana bokeh 7 Bokeh ampidirina ao anaty volavolanao amin'ity Krismasy ity.
Loharano - Freepik, Vectorized
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Cartoon vector » Karatra Krismasy 11
Tranonkala 3 misy sary vektor maimaim-poana
Teknolojia 12 Maimaimpoana